Iipleyiti eziLungisa iMagnetic abavelisi kunye nababoneleli - China Umatshini wokuLungisa iMagnetic Factory
I-ABS yerabha esekwe kwiimagnethi ezijikeleziweyo zokubekwa kumbhobho wePVC efakwe kwiFomu yentsimbi
I-ABS yeRabha esekwe kuMazibuthe ojikelezayo inokulungisa kwaye ibeke umbhobho we-PVC olungisiweyo ngokuchanekileyo nangokuqinileyo kwifom yentsimbi. Xa kuthelekiswa neplate yokulungisa imagnethi yentsimbi, iqokobhe lerabha le-ABS liguquguqukayo ukuze lilungele imibhobho yangaphakathi enobungakanani. Akukho ngxaki ihamba kwaye kulula ukuyisusa.
Ukubamba iimagnethi zokuSasaza ii-Anchors Ukubeka kunye nokulungisa
Iimagnethi zokubamba zisebenza ukubeka endaweni kunye nokulungisa ukusasaza iiankile zokunyusa ngefomu yentsimbi. Iirandi ezimbini ezisikiweyo zijijelwe kumzimba weplate kazibuthe, ukwenza isiseko serabha kube lula xa ufaka.
Isiphathi seMagnetic Magnetic kunye nePin eguqukayo yePin yokuLungisa iSocket Magnet D65x10mm
Abanini beplate kazibuthe baveliswa ukufaka iziseko ezinomsonto, imikhono kwiphaneli yekhonkrithi kwifom yentsimbi. Iimagnethi zineempawu zokubambelela kakhulu kwi-stromg ezikhokelela kwisisombululo esisebenzayo, esihlala ixesha elide.
I-1.3T, 2.5T, 5T, 10T i-Steel Recess yangaphambili yeMagnet yokuLungisa i-Anchor
I-Steel Recess yangaphambili yeMagnet yenzelwe ukulungisa i-anchors kwi-mold mold, endaweni ye-rubber yekhefu yangaphambili. Ubume be-semi-sphere kunye nomngxunya osembindini wesiko wenza kube lula ukuphuma kwipaneli yekhonkrithi xa usonakalisa.
Isinyithi Magnetic Triangle Chamfer L10x10, 15 × 15, 20 × 20, 25x25mm
Isinyithi Magnetic Triangle Chamfer ngokugqibeleleyo ibonelela ngokubekwa ngokukhawuleza nangokuchanekileyo ekwenzeni imiphetho ebiyelweyo kwiikona kunye nobuso beepaneli zodonga zekhonkrithi zangaphambi kolwakhiwo lwentsimbi.
I-M16, i-M20 ifakelwe i-Plate yokulungisa iMagnetic yokuLungisa iSokethi yokuPhakamisa kunye neNkqubo yokuPhakamisa
Ipleyiti yokuLungisa iMagnetic efakiweyo yenzelwe ukulungisa isitshixo esifakelweyo kwimveliso yesamente. Umkhosi unokuba yi-50kg ukuya kwi-200kgs, ilungele izicelo ezizodwa kumkhosi wokubamba. Ubungakanani be-Thread bunokuba yi-M8, M10, M12, M14, M18, M20 njl.